Oil pombi zvikamu
Burner Performance mamiriro
by pamusoro 18-09-04
Al-in-mumwe Blower. Auto-mashandiro Manual chinja rimwe danho / maviri mudariro akatsvaira chubhu pamberi kuvesa. Safety murazvo monitors hurongwa. Gedhi mhepo uchaisa otomatiki apo burner kuyerera. (Chinyorwa chinja suwo mhepo mumwe Danho) Zviri nyore kuti installation, basa uye ...
Burner Notice kana kutenga
by pamusoro 18-09-03
Cherechedzai kana kutenga: The yose dhayagiramu kwakaitwa chinobudirira mureza iri experimental bhaira. Mamiriro chaiyo zvingava zvakasiyana nekuda zvinhu zvinotevera: a. kumanikidzwa bhaira angasava zvakafanana. Saka kugona iyo burner chinokunda bhaira nevamwe differe ...
Dual Fuel Burner Heavy Oil / Gas muruzivo rwokugadzira waivako
1.Alternate methane gasi / rinorema mafuta burner. 2.Air-gasi nokusanganisa panguva dzenyanga nenyere uye Two-Danho mberi goho oparesheni. neKara kana chiutsi kuti sprayer. 3.Ability kuwana Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri combustion netsika kubudikidza aigara lating combustion mhepo uye dzenyanga nenyere. 4.Maintenance akwanise ne pakuti kuvhenganisa chikwata ane ...
Zvishoma nezvishoma mumatope / Modulating Light Oil Burner muruzivo rwokugadzira waivako
by pamusoro 18-09-02
1.Light mafuta burner. 2.Two-Danho mberi goho oparesheni. 3.High kumanikidzwa zvokuimba atomisation peturu kushandisa kamwene. 4.Ability kuwana Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri combustion netsika kuburikidza yokudzora combustion mhepo uye dzenyanga nenyere. 5.Maintenance akwanise ne ndechokuti atomisation chikwata anogona kubviswa pamwe ...
kutaura BAOSHAN, Shanghai, CHINA
runhare + 86-021-56730500